Indaba mayelana nendlela ukulungiselela sokubelethisa
Abesifazane abaningi abangazange sabusiswa umama, ngokuqinisekile cabanga indlela yokulungiselela sokubeletha okudingeka ukwenze ngalokhu. Ukuze abesifazane, kuza sikhathi esibucayi, lapho enendawo ukucabanga ngabo nje kuphela kodwa futhi mayelana ingane yabo.
Zokubeletha angaya kahle kuphela uma kukhona izimo ezifanele. A obelethayo kufanele ibe ajwayelekile, okunethezekile. Kuphela kuleli cala, lona wesifazane has umuzwa ezithile nokuphepha nokuvikeleka. Uma ukhulelwe iqala ukukhuluma nabantu abadala mayelana nendlela yokulungiselela nokubeletha, abaningi basabela ukuthi ogogo bethu esetshenziswa abelethe ngaphandle kokuzilungiselela, futhi konke kuphumelele ngokuphepha, futhi benezingane zabo kuhle. Abakhulu bathi kunjalo, ukuze umama okhulelwe ukuba ingakhathazeki ngoba iziyaluyalu extra ezingapheli zingayilimaza impilo yakhe. Imvelo uqobo enakekela konke, kuzodingeka lapho. Abesifazane abakhulelwe kufanele baziswe ukuthi umntwana wakhe esezelwe futhi ngaleyo ndlela kancane kancane azilungiselele ngokwengqondo nangokomzimba. Zokubeletha - inqubo yemvelo, kusukela namuhla alikho futhi elinye indlela ekuzalweni isidalwa esiphilayo. Kusukela ekukhulelweni lokuqala kanye ukuzalwa komntwana eshintsha ngokuphelele ukuphila kwabazali, bamane kudingeka zazi ukuthi zingakhetha ukulungiselela sokubelethisa futhi banqobe ukuhlolwa kwengqondo futhi ngokomzimba ngemuva ukubonakala ingane. ukulungiselela Physical sokubelethisa kuyadingeka ukuze owesifazane kancane kancane, ngosizo ezinye umzimba, ukuqinisa imisipha kudingekile, kuhileleke nezinye izinkinga okuyinto kule nqubo. Ulwazi mayelana nokuthi ukulungiselela sokubelethisa, owesifazane unolwazi mayelana ezinye izinguquko emzimbeni wakhe.
Yini umzimba ukwenza ukuze alungiselele sokubelethisa
Kusukela ezikhathini zasendulo, siyazi izinzuzo ukuphefumula umzimba, kodwa singazi ngisho bacabange ukuthi abantu uphefumule. Breathing izivivinyo ukulungiselela sokubelethisa kuzosiza uphumule, ukuzola futhi unciphise ukungezwani esifubeni sakho. Bonisa kwabesifazane abakhulelwe neqhaza ukusetshenziswa okunengqondo-mpilo imuncwe, ngoba abantu kokuchitha amandla ngoba umoya ngamunye. Kukhona futhi amasu ezikhethekile ukuphefumula ngesikhathi sokubeletha ukuze basize focus bese ngehlise umoya. ukuphefumula umsebenzi isikhathi akufanele kube sekudlule imizuzu engaphezu kwengu-10. Owesifazane angase ukhethe umsebenzi elula. Odokotela batusa okulandelayo umsebenzi kwabesifazane abakhulelwe: owesifazane udinga ukubeka isandla esisodwa ngesisu sakhe, kanye nezinye - esifubeni. Khona-ke ukwenza iningi umoya kakhulu, bese kulandela isikhalo umoya kancane kancane ngokusebenzisa ekhaleni.
Ukulungiselela wesibeletho sokubelethisa
Nale nqubo angase abhekane omama abaningi abalindele ababengenabani esibhedlela ngaphambi ukulethwa kakade ezinsukwini zokugcina kokukhulelwa. Kuyadingeka abesifazane abaye Kutholwe wesibeletho ukubhekana umcimbi oluzayo. Ngaphambi kokuzalwa wesibeletho kwenzeka izinguquko eziningi, ikakhulu ezihlobene ngemuva kwama-hormone, element eyinhloko okuyinto hormone ocansini nowesifazane - estrogen.
Yesifo celiac: izimpawu kuyadida